ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျောက်မျက်အမျိုးမျိုး ၂၅၀ ကျော်ကိုအမြဲတမ်းပြသသည်။
ပုဂ္ဂလိကနှင့်လွတ်လပ်သော gemological Institute, gemological testing and research services ။
GEM & GEMOLOGY သို့မိတ်ဆက်ခြင်း
GEM IDENTIFICATION - စုစည်းခြင်းနှင့်ကုသခြင်း - စျေးနှုန်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက် & ထရေးဒင်း
ပုဂ္ဂလိကနှင့်သီးခြားလွတ်လပ်သော gemological Institute, gemological testing, research service နှင့် gemstone Certificate များကိုပေးသည်။
ကမ္ဗောဒီးယားသည်နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ ခရီးသွားခြင်း၊ တည်းခိုခြင်း၊ မိုင်းတွင်းနှင့်ကျောက်မျက်များအပါအ ၀ င် ၂ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိခရီးစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်သည်။
ကျောက်မျက်ရတနာ & Gemology ဖို့နိဒါန်း
သဘာဝရတနာများ, ဒြပ်, ကုသမှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ဘယ်လို? အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းကိုဘယ်လိုခန့်မှန်းရမလဲ။ သင်ဤအတန်းအတွင်း၌သင်တို့၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုအဖြေရလိမ့်မည်။
သစ် ဖြေ - ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းခရီးသွားလာခွင့်မရသောကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကြီးမားသောတောင်းဆိုမှုကြောင့်ယခုအွန်လိုင်းတွင်လေ့လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးများနှင့်အဖြစ်အပျက်များ။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမြမြသည်ခြင်္သေ့မြ၊ ဒါပေမယ့်ခြင်္သေ့မြ ... [... ]
မျှော်လင့်ချက်စိန်သည် ၄၅.၅၂ ကာရက်အပြာရောင်စိန်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှတွင်အကြီးဆုံးစိန်ပြာ [... ]
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်၌ဤမမျှော်လင့်ဘဲအလည်အပတ်ခရီးအတွက်မစ္စစ်အန်ဂျလီနာဂျိုလီအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် [...]
မိုးကုတ်ခရီးစဉ် - မိုးကုတ်ဟိုတယ် - မိုးကုတ်မြန်မာပတ္တမြားမိုးကုတ်ခရီးစဉ်၊
Sabara Angkor Resort & Spa တွင်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးသင်တန်း
Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet တွင်လက်ဝတ်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးသင်တန်းကို ists ည့်ခံသူများကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီး [... ]
Luc Yen တွင်လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းယနေ့ကျွန်ုပ်ကို Luc Yen ၌ဗီယက်နမ်အမျိုးသား [... ] မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားမှအင်တာဗျူး M6 ပြင်သစ်ရုပ်သံလိုင်း“ ENQUETE EXCLUSIVE” မှကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း [... ]
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်3ရက်အတွင်းပို့ဆောင်ခြင်း
FedEx Express သည်တင်ပို့ခြင်းအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့် ၃ ရက်မှ ၄ ရက်ကြာပါသည်။ ပေးပို့ပြီးနောက်လက်မှတ်လိုအပ်သည်။
ကြယ်ပွင့်ပတ္တမြား ၃.၀၂ ct $75.00
ကြယ်ပွင့်ပတ္တမြား ၃.၀၂ ct $60.00
မိုးကုတ်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ပတ္တမြား 20K ရွှေပုတီး $579.00
ကြယ်ပွင့်ပတ္တမြား ၃.၀၂ ct $120.00
အနက်ရောင်ကြယ်နီ Sapphire 0.78 ct $18.00
အပြာရောင်နီလာ 2.59 CT $1,036.00
အနက်ရောင်ကြယ်နီ Sapphire 1.10 ct $25.00
အပြာရောင်နီလာ 1.33 CT $173.00
မြ 0.29 ct $58.00
မြ 0.58 ct $116.00
မြ 0.14 ct $28.00
မြ 0.31 ct $62.00
14K နှင်းဆီရွှေစိန်လက်စွပ် $470.00
စိန် 0.20 ct $130.00
စိန် 0.15 ct $98.00
14K နှင်းဆီရွှေစိန်လက်စွပ် $530.00
…ငါလေ့လာခဲ့တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာအနာဂတ်မှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခြားအတန်းတစ်ခုကိုတက်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလက်ဝတ်ရတနာများဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေပါက၊ ဤသင်တန်းကိုသင်တက်သင့်သည်။
နေခြည် / ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2020
…လက်ဝတ်ရတနာကတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ၀ န်ထမ်းတွေကအရမ်းဖော်ရွေပြီးကျွမ်းကျင်တယ်။ ငါဆိုင်မှထွက်ခွာသွားစဉ်လှပသော Onyx လက်စွပ်နှင့်ကမ္ဗောဒီးယားတွင်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကာလကိုအမြဲအမှတ်ရနေလိမ့်မည်။ ငါဒီမှာအချိန်ပိုများများရှိရင်ငါကွင်းဆက်လုပ်ဖို့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုစမ်းချင်တယ်။
Emz / နိုဝင်ဘာလ 2019
... ဒါဟာ Gemological Institute ကိုသွားသင့်တယ်။ ၀ န်ထမ်းတွေအားလုံးကအရမ်းကျွမ်းကျင်တယ်၊ ငါသေချာပေါက် Siem Reap သို့ပြန်သွားပြီး, ငါ့နောက်လာမည့်အလည်အပတ်ကဒီမှာကနေကျောက်မျက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကြယ် ၅ ပွင့်!
TinkaMauu / နိုဝင်ဘာလ 2019
... လက်ဝတ်ရတနာများသည်တတ်နိုင်ပြီးလှပသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုသောအလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Siem Reap တွင်အမြဲတမ်းအာမခံချက်မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်ကြသည်။
လော်ရန့် B / ဇူလိုင်လ 2019
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ကျောက်တုံးအမျိုးမျိုးရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ နောက်ဆုံးတော့လှပသောအဖြူရောင်ကျောက်မျက်လည်ဆွဲကိုတွေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ Gemological Institute မှကျေးဇူးတင်ပါသည်!
လိုင်း / မေလ 2019
ကမ္ဘောဒီးယားရှိကျောက်မျက်အမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ဗိမာနျတျောမှတပါးလုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာ။
Benji ကို C / မေလ 2019
... သူမဆီပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ Daini တကယ်တော့ဆိုင်မှကျောက်မျက်။ သူမသာမရှိရင်အဲဒီဆိုင်ကနေဘာမှမရချင်တော့ဘူး။ နိဂုံးချုပ်ဆိုင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၎င်းသည် Siem Reap တွင်တွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဆိုင်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ / သြဂုတ်လ 2019
... သူကကျွန်မရဲ့အီးမေးလ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပို့ပေးပြီးဒီဇိုင်းနဲ့စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ လက်စွပ်သည်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာပြီးမည်မျှကောင်းမွန်ပြီးလှပသည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ငါဒီဝန်ဆောင်မှုကိုလုံးဝထောက်ခံလိမ့်မယ်၊
မင်္ဂလာပါ / သြဂုတ်လ 2019
... သင်တရားဝင်ရတနာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဤအရပ်သို့သွားရန်သေချာပါစေ။ ၎င်းတို့သည် Siem Reap တွင်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားသောဆိုင်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပြီးသင်၏မေးမြန်းချက်အားလုံးကိုဖြေကြားလိမ့်မည်။
Oly1610 / သြဂုတ်လ 2019
BTC- Bitcoin (฿)
SZL- Swazi lilangeni (L)